famous - Synonyms of famous | Antonyms of famous | Definition of famous | Example of famous | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for famous
Top 30 analogous words or synonyms for famous
ရှိန်းကျိန့်မြို့ In recent years, the East Coast (shoreline) of Shenzhen has attracted more and more tourists, including backpackers. One of the most famous beaches is Xichong in the south of Dapeng Peninsula.
ဆိုနီ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် SME နှင့် ဘာတယ်စမန် တေးဂီတ အုပ်စု (Bertelsmann Music Group) တို့ပူးပေါင်းပြီး ဆိုနီ ဘီအမ်ဂျီ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေရေး အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Famous Music ကိုဝယ်ယူခဲ့ကာ အမ်မီနမ်၊ အေကွန် နှင့် အခြားတေးသံရှင်များ၏ မူပိုင်ခွင့်ကို ရယူခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဘာတယ်စမန် မှ ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ဆိုနီ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေရေး အဖြစ် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ပေါ်ဦးသက် ၁၉၅၉-ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Famous Artist School အနုပညာကျောင်းတစ်ခုမှ ပေးသော စာပေးစာယူ စကောလားရှစ်ကို ရရှိခဲ့ပြီး ပန်းချီအနုပညာသင်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ သုံးနှစ် စာပေးစာယူသင်တန်းကို နှစ်နှစ်ဖြင့် သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့ပြီး First Grade အဆင့်ဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အသက် ၂၁နှစ် အရွယ်တွင် သူသည် သူ၏ အနုပညာဖြင့်အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းခဲ့ကာ ထိုစဉ်က မဂ္ဂဇင်းစာစောင်များ၊ မန္တလေးပြည်သူ့ နေ့စဉ် သတင်းစာ၊ ကြေးမုံ သတင်းစာ၊ ရန်ကုန် လူထုနေ့စဉ် သတင်းစာတို့တွင် သရုပ်ဖေါ်ပုံများ၊ ကာတွန်းများ ရေးဆွဲခဲ့သည်။
ကရာတေးဒို ဥရောပသို့ ကရာတေးပညာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပုံ။ ။ ၁၉၆၀နှစ်နောက်ပိုင်းကာလတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကရာတေးပညာရှင်များ စေလွှတ်ခြင်းဖြင့် ဥရောပတွင် ကရာတေးပညာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ Iwate Prefecture မှ ဆရာကြီး "ကာနာဇာဝါ ဟီရိုးခါ့ဇု SHIHAN Hirokazu Kanazawa" One of the most famous karate masters ကို ဂျာမဏီနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့၏ ကရာတေးနည်းပြအဖြစ်၎င်း၊ ဟီဂါ့ရှိအွန်းနာ့ မိုရိအို ကို ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ ကရာတေးနည်းပြအဖြစ်၎င်း အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ယခင်ဆိုဗီယက်နိုင်ငံ တွင် ၁၉၆၀နှစ်နောက်ပိုင်း မော်စကို တက္ကသိုလ်တွင် ကရာတေးကိုအသင်းရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင် ဆိုဗီယက်အစိုးရက ကရာတေးပညာအပါအဝင် အခြားကိုယ်ခံပညာများကိုပါ ရုတ်တရက် တားမြစ်ပိတ်ပင် ခဲ့သည်။ ရုရှား ကိုယ်ခံပညာဟု လူသိများသော “စမ်ဘို” sambo ကို စတင်ကစားလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲပြီးနောက် ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကရာတေးကို ပြန်လည်ကစားလာခဲ့ကြပါသည်။